Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Akụkọ nwata Theo Hernandez gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Anyị Theo Hernandez Biography na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, mmalite ndụ, ezinụlọ, nne na nna (Jean-François na Laurence Py Revolte), Nwanna (Lucas). Nke ka nke, Theo's Girlfriend/Nwunye ga-abụ (Zoe Cristofoli), ụdị ndụ, ndụ onwe onye na ihe bara uru.
Na nkenke, ihe ncheta a bụ gbasara akụkọ ndụ Theo Hernandez, onye na-eme n'azụ aka ekpe. Otu nwa nwoke nna ya hapụrụ ezinụlọ ya, na-enweghị adreesị ebe ọ na-aga.
Ọzọkwa, a nwa nwoke yiri Jorginho, bụ́ onye ji ihe mgbu nkewapụ nne ya ma ọ bụ nna ya mee ihe maka ihe ịga nke ọma ya.
Lifebogger na-atụ anya ịkpali agụụ akụkọ ndụ gị gbasara Theo Hernandez's Biography. Iji nweta nke ahụ, anyị enyela gị ihe ngosi nka nke akụkọ ndụ mbụ ya na ihe ịga nke ọma ya. Lee, njem ndụ Theo Hernandez.
Akụkọ ndụ Theo Hernandez na akụkọ nwata - ekpughere eziokwu ndị a na-ekwughị.
Ee, ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na ụdị egwuregwu ya na-akụ mgbịrịgba banyere oge mbụ nke Gareth Bale dị ka aka ekpe-azụ.
Theo na-adabere n'ike ya jikọtara ọnụ, ọsọ ọzịza, na ike dribling. Ọ na-eji nke ahụ kpataara ndị na-emegide ya ọtụtụ nsogbu.
N'agbanyeghị ọtụtụ accolades gburugburu aha ya, anyị otu hụrụ lags ụfọdụ. Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole agụọla ụdị nke Theo Hernandez's Biography nkenke. Anyị akwadola ya, na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite ya memoir.
Akụkọ nwata Theo Hernandez:
Maka ndị na-amalite Biography, ọ na-ebu aha otutu - "Ụgbọ elu". Aha ya zuru oke bụ Theo Bernard François Hernandez.
A mụrụ Theo na 6th ụbọchị nke October 1997 nne ya, Laurence Py na nna, Jean-François Hernandez. Marseille, France, bụ ebe amụrụ Theo.
Onye ọkachamara ọkachamara French bụ otu n'ime ụmụ nwoke abụọ (ya onwe ya na nwanne ya nwoke, Lucas) mụrụ site na njikọ dị n'etiti papa ya na mama ya.
Ka m gosi gị nne na nna Theo Hernandez - ndị nyere ya ndụ. Nke a bụ Laurence Py Revolte na Jean-François Hernandez. Papa Theo na mama m kewapụrụ.
Zute nne na nna Theo Hernandez. Onye aka ekpe nwere nne mara mma na nna mara mma.
Theo Hernandez nọrọ ụbọchị mbụ ya na otu nwanne ya nwoke bụ Lucas. Ha abụọ dị nso n'ụzọ pụrụ iche site n'ụbọchị mbụ ma mee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile jikọrọ.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ụmụnna Hernandez bụ ụdị - nke jikọtara ịhụnanya - ha anaghị ekwe ka ibe ha kpagharị n'ọchịchịrị naanị.
Zute Ụmụnna Hernandez - Theo na Lucas. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke ha na-egosi ibe ha enweghị ihe ọ bụla.
Ihe ndabere ezinaụlọ Theo Hernandez:
Ọkachamara ndị egwuregwu bọọlụ France sitere na ezinaụlọ nwere ezigbo ego. Akụ na ụba nke Ezinụlọ Theo Hernandez sitere n'aka Nna ya nke ukwuu. Jean-François, onye egwuregwu bọọlụ kacha elu, nwetara ezigbo ego na Atletico Madrid - laa azụ n'oge.
N'aka nke ọzọ, nne Theo Hernandez bụbu onye na-eme egwuregwu. O tinyere aka na egwuregwu n'ọkwa dị mma tupu ọ lekwasị anya n'ịzụlite ụmụ nwoke ya abụọ naanị ya. Gịnị kpatara naanị ya?… ọ bụ n'ihi na nne na nna Theo Hernandez kewara mgbe ya na Lucas dị obere.
Ọ na-ewute Lucas na Theo (n'oge) ịhụ papa ha na mama ha nwere ọtụtụ nghọtahie. Ọpụpụ nna ha si n’ezinaụlọ kpụzie ndụ ụmụnne Hernandez. Ha jiri ihe mgbu nke nkewa nne na nna mee ihe dị ka ihe mkpali iji nwee ihe ịga nke ọma.
Nna Theo Hernandez furu efu, na-ahapụghị adreesị ebe ọhụrụ ya. Nke ahụ kpasuru mama ya, Laurence Py Revolte, iwe nke ukwuu. Site n'oge ahụ, ọ maara naanị otu ihe - ịlụ ọgụ maka ụmụ ya nwoke ka ha nwee ike ịlanarị ndụ na-enweghị nna ha. Obi dị m ụtọ na ha mere ya.
Ezinụlọ Theo Hernandez:
Ị maara ihe mere e ji mụọ ya France?… ọ bụ n'ihi na nna ya, Jean-François, na-agba bọọlụ ya na mba - n'oge ahụ. Ọ bụ ezie na a mụrụ na Marseille, ndị ezinụlọ Theo Hernandez na-akọwa onwe ha dị ka ndị si Spen.
Site na agbụrụ agbụrụ, nchọpụta nwere ya, na o yikarịrị ka ọ ga-abụ nke Spanish Basque. Nke a yiri Mikel Oyarzabal's agbụrụ. Theo, onye egwuregwu bọọlụ nke mba abụọ na-egosipụtakwa onwe ya na omenala Iberian nke Span.
Map a na-akọwa Mmalite Ezinụlọ na Obodo nke Theo Hernandez.
N'ikwu banyere mmalite nke ezinụlọ ya, Theo kwuru otu oge;
Dị ka Lucas, anyị na-aghọta ma na-asụ Spanish nke ọma. Agbanyeghị, ọbara anyị bụ French.
Ana m eji ịhụnanya m nwere n’ebe France nọ tụnyere nke nne m, bụ́ nwanyị m ji ihe nile.
Ọzọkwa nye nwanne m nwoke, nne na nna nne na nna nna m.
Laurence Py Revolte ji anya ya (dị ka onye na-eme egwuregwu) ịhụ ọdịnihu ụmụ ya. Ná mmalite, o mere ma Theo na Lucas ịga ụlọ akwụkwọ football nke dabeere na egwuregwu.
Nne Theo Hernandez debara aha ya na nwanne ya nwoke nke tọrọ aha na ụlọ akwụkwọ mmuta bọọlụ, nke bụ naanị ụlọ na-esote ụlọ mgbatị ya.
N'ihi nke a, ọ bịara dị mma maka Laurence Py ịhapụ ụmụ nwoke ahụ n'ụlọ akwụkwọ ha wee gaa na klas mgbatị ya.
N'ime egwuregwu niile, nhọrọ nke Football mechara ghọọ osisi ọla edo maka ụmụnna Hernandez. Ebe ha abụọ chọtara ndò na nkasi obi pụọ n'eziokwu na-enye nsogbu nke enweghị nna na ndụ ha.
Akụkọ ndụ Theo Hernandez - Ndụ ọrụ mbụ:
Nne ha, Laurence Py Revolte, ekwupụtaghị nchegbu n'oge ahụ ma ụmụ ya abụọ kpebiri na ha agaghị eme ihe ọ bụla na ndụ - ma e wezụga ịghọ ndị ọkachamara ọkachamara.
Cheta, nke a bụ egwuregwu nna ha (Jean-François Hernandez), onye gbahapụrụ ezinụlọ.
Akụkọ CF Rayo Majadahonda:
Mgbe o nwesịrị ule na-aga nke ọma, nwanne Hernandez debanyere aha na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Spanish a ma ama.
Nnyocha na-egosi na CF Rayo Majadahonda bụ otu ndị dabeere na Majadahonda, na obodo Madrid kwụụrụ onwe ya. Ị nwere ike ịhụ obere Theo n'etiti ndị otu ya?
Theo na Lucas malitere na ụkwụ siri ike na CF Rayo Majadahonda. N'ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ, ha na ha ghọrọ enyi Marcos Llorente na otu n’ime Diego Simeone'ụmụ nwoke - ndị gbakwara egwu ebe ahụ.
Ọ nwere ike ịmasị gị ịmara na Theo na Lucas bụkwa ezigbo enyi Rodri - onye ọkpụkpọ Atletico Madrid na Manchester City mechara. Foto dị ebe a, ụmụ nwoke atọ ahụ nwere aha nna Hernandez. Ma ha amaghị na Rodri ga-abụ onye iro mba otu ụbọchị.
Zute Ụmụnna Hernandez n'akụkụ Rodri (aka ekpe).
Ndị egwuregwu atọ niile (ọnụ) gafere n'ụdị dị ala nke CF Rayo Majadahonda.
Ha, karịsịa Theo (otu afọ na-eto eto) ghọrọ nnukwu kpakpando na onye ndu n'ime otu ha. Oge kacha ukwuu na ngalaba nke obere ha bụ imeri iko obodo Madrid.
Nke a bụ oge kacha ukwuu Theo Hernandez na Rayo Majadahonda. Dị ka onye ndu n'etiti ụmụ nwoke, o ji ebube buliri otu iko ahụ.
N'oge na-adịghị anya mgbe o nyeere ndị otu ya aka imeri asọmpi ahụ, Atletico Madrid kpọtụụrụ ndị mụrụ nwa nwoke ahụ. Laurence Py Revolte (Theo Hernandez's Mum), jere ozi dị ka naanị kọntaktị maka ya na Lucas. Nke a bịara n'ihi enweghị nna ha, Jean-François.
N'afọ ahụ a gọziri agọzi (2007), Atletico Madrid mere ndokwa onwe ya iji weta ụmụ nwoke (Theo, Lucas na Rodri) na ụlọ akwụkwọ mmuta ha.
N'oge a, ọ bịara doo ọtụtụ ndị maara ezinụlọ ha anya - na a kara aka na ụmụnna ga-adị ukwuu karịa nna ha gbapụrụ agbapụ.
Akụkọ ndụ Theo Hernandez - Njem a ma ama:
Na Atlético Madrid, Baller nwere mmalite dị mma na afọ iri na ụma ya. Klọb ahụ debere Nwanna ya tọrọ (Lucas) otu afọ n'ihu ọgbọ ya.
Theo mere ka agụụ ya bụrụ naanị ọrụ ya. Mgbalị ahụ na mkpebi siri ike o meworo mere ka ntụkwasị obi ya too karịa.
N'ịbụ onye na-enweta ike site na ụlọ akwụkwọ mmuta mbụ ya, nwata ahụ tolitere ka ọ bụrụ ihe dị mkpa maka ụlọ akwụkwọ mmuta Atletico Madrid.
Mgbe ha na-aga n'ihu site na ndị ntorobịa, Atletico Madrid - n'oge okpomọkụ nke 2015 - kwalitere Theo Hernandez na nchekwa ha - na Tercera División. Ọbụna tupu ọ banye n'òtù ndị isi ọgbakọ ahụ, nwata ahụ nọgidere na-achịkọta ihe nrite.
Ndị a bụ trophies Theo chịkọtara mgbe ọ nọ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Atletico Madrid.
Njem na-aga Real Madrid:
Na 3 February 2016, Theo (n'ọṅụ nke mama ya na ndị ezinụlọ ndị ọzọ) bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya. Iji zere nnukwu klọb zuru ohi na ọnụ ala, Atletico Madrid gbatịpụrụ nkwekọrịta ya ọnwa isii ka ọ bịanyere aka na nke mbụ.
Mgbe agbatịchara nkwekọrịta ahụ, Diego Simeone buuru Theo na ụlọ ọgbakọ ndị otu - Deportivo Alavés otu afọ. Ọ ghọrọ onye na-amalite mgbe niile na mmetụta ozugbo na ndị otu Basque.
Theo Hernandez gbawara na asọmpi Copa del Rey site n'inyere Alavés aka iru asọmpi ahụ. Mara, nke a bụ ikpeazụ nke klọb ahụ n'ime afọ iri itoolu na otu ha.
N'egwuregwu ahụ, Dike Theo gbara megide Lionel Messi si Barcelona. Nke ahụ nwetara ndị iro Barça, Real Madrid, hụrụ ya n'anya.
Dị ka ihe ngosi vidiyo, nke a bụ otú Theo Hernandez si dị mma tupu Real Madrid abịa na-akpọ maka ọrụ ya. N'ụzọ dị mwute, n'ime oge a, onye Russia na-ebubo ebubo ebubo ebubo idina ya n'ike. Ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ a na ngalaba ikpeazụ nke ncheta a.
Akụkọ ndụ Theo Hernandez - Akụkọ ịga nke ọma:
Los Blancos egbughị oge n'ịkwụ ụgwọ ntọhapụ nde euro 24 etinye na nwata ahụ. N'ụbọchị 5th nke July 2017, Theo Hernandez, n'ihu mama ya, nne nne ya na ndị ezinụlọ ndị ọzọ, bịanyere aka na nkwekọrịta afọ isii na Real Madrid.
Lee oge mpako maka ezinụlọ ya. Ịbịanye aka maka klọb kacha ukwuu n'egwuregwu bọọlụ ụwa.
Na enweghị nke Marcelo, Theo jupụtara maka ebe ekpe-azụ. Ọ bụghị naanị na ọ nyere Real Madrid aka inweta mmeri Champions League nke atọ ha na-eso. Ya na Los Blancos, o meriri Supercopa de España, UEFA Super Cup na FIFA Club World Cup.
Theo Hernandez na Real Madrid meriri iko ndị a.
Ịga n'ihu na nnukwu Heights:
Ọpụpụ Theo Hernandez na Real Madrid nwere mmetụta nke ndị otu ya. O mere ka Los Blancos na-achọ ọrụ nke ọzọ ekpe-azụ Ferland Mendy. Theo kwagara (na mbinye ego) na Real Sociedad maka imechi ịkwaga AC Milan na-adịgide adịgide.
Ya na ndị Rossoneri, ọ ghọrọ ike a ga-eji na-agụ ya. Theo Hernandez kwalitere arụmọrụ na nchekwa abụọ na ọgụ mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ Milan nke oge na onyinye ndị otu Serie A nke afọ. Lelee ụfọdụ oge ya mara mma na uwe elu Milan.
Dị ka n'etiti 2021, nkà na-arị elu nwere ike inwe mmetụta ọdịnihu ya na-akpọ ya na ndị otu mba France. Nke ahụ mere n'ezie dị ka Didier Deschamps na 26 Ọgọst 2021, nyere Theo oku izizi ya na ndị otu egwuregwu France.
Ọnwa na-abịa (October 2021) gara nke ọma. Maka obi ụtọ nke nne ha (Laurence Py Revolte), ụmụnna Hernandez (Theo na Lucas) maka oge mbụ, natara oku site na Deschamps. Nchapụta ha nyeere France aka ị nweta aha 2020/2021 UEFA Nations League.
Ụmụnna Hernandez na-anụrị aha mba mbụ ha ọnụ.
Lelee ihe mgbaru ọsọ Theo meriri Belgium nke mere ka France gaa na njedebe ma mesịa merie UEFA Nations League 2021. Theo meriri ma soro ezinụlọ ya mee ememe na njedebe nke egwuregwu ahụ.
N'oge a na-ede akụkọ ndụ a, ọ bụghị naanị anyị, kama ọ bụ ọchịchọ kacha mma ka ụmụnna Hernandez na-egwuri egwu n'akụkụ na 2022 FIFA World Cup na Qatar. Ha bụ ndị kasị mma n'ime ọgbọ ha nke nkà na-adịghị agwụ agwụ. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Theo Hernandez Ndụ hụrụ n'anya:
Mgbe Rocky Left-Back malitere ịkọ akụkọ maka ọmarịcha egwuregwu bọọlụ ya, ọchịchọ siri ike a sitere n'aka ndị na-akwado ya banyere ịmara ọnọdụ mmekọrịta ya. Theo Hernandez ọ nwere enyi nwanyị?… Ọzịza dị mkpirikpi, EE! Ugbu a, ka m gosi gị ya.
Banyere Zoe Cristofoli - enyi nwanyị Theo Hernandez:
Ihe abụọ pụtara ìhè na ọdịdị anụ ahụ ya. Nke mbụ, ọ bụ WAG mara mma. Nke abụọ, egbugbu Zoe Cristofoli na-eme ka ọ mara mma. Foto dị ebe a, ọ na-anya isi dị ka enyi nwanyị Theo Hernandez.
Nke a bụ Zoe Cristofoli - nwanyị ji mkpịsị ugodi nke obi Theo.
Zoe Cristofoli mụrụ na 5th ụbọchị nke September 1996, a feat na-egosi na ọ bụ otu afọ tọrọ enyi ya nwoke. Foto dị n'ebe a, ma ndị hụrụ ibe ha n'anya dabara onwe ha na ụdị egbugbu yiri nke ahụ.
Olee otú Theo Hernandez si zute Zoe Cristofoli:
Mmekọrịta ha malitere n'oge na-adịbeghị anya site n'oge ederede - n'afọ 2020. Ihe niile malitere mgbe enyi ya kpọrọ Theo ka ya na ya rie nri abalị. Ọ dabara nke ọma, Zeo (enyi enyi Theo) sochiri ya.
N'uhuruchi ahụ, Theo rịọrọ nọmba ekwentị Zeo na nkọwa Instagram. Ọ dabara nke ọma, o nyere ya. Mgbe nri abalị ahụ gasịrị, nwa nwoke hụrụ n'anya Theo malitere iziga Zoe ozi - ehihie na abalị.
N'ụzọ dị ịtụnanya, anabataghị ozi Theo hapụrụ na akaụntụ social media ya. Zeo kpachaara anya mee nke ahụ - ka ọ na-agbasi mbọ ike inweta.
Ọ nọgidere na-enwe àgwà nke ịjụ Theo ruo izu ole na ole tupu ya emechaa zaghachi ozi ya. N'ịhụ nke ahụ, Theo nwere obi ụtọ kpọrọ ya òkù maka nri abalị - nke o kwetara. N’abalị ahụ, ha abụọ gbara egwu wee hụ ibe ha n’anya nke ukwuu.
Nke a bụ Theo Hernandez, n'ikpeazụ chọta ịhụnanya na Zoe Cristofoli.
Mgbe ọnwa ole na ole gara nke ọma nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, Theo na Zoe kwagara n'ụlọ Theo Hernandez, ha abụọ malitekwara ibikọ ọnụ. Ugbu a,… nweta nkọwa ndị ọzọ gbasara akụkọ ịhụnanya Theo na Zoe site na ikiri vidiyo a.
Ọnye na-bụ Zoe Cristofoli:
Enyi nwanyị Theo Hernandez bụ nwanyị nwere ọtụtụ azụmaahịa. Zoe's bụ ihe nlereanya, onye na-ede blọgụ ejiji na onye na-eme ihe nkiri. Dị ka ị chọpụtala, egbugbu ahụ Cristofoli na-enye ya nnukwu ọnụ na ụlọ ọrụ ihe nkiri Italy.
Dịka Nnyocha anyị siri kwuo, Zoe Cristofoli bụkwa nwanyị ọchụnta ego. Ọ bụ onye isi na onye nchoputa Ink Studio Lagrange, na Torino, Italy. MM Consulting Services, na Milan, na-anọchite anya ya yana jikwaa azụmahịa ya.
Nwunye Theo Hernandez ọ ga-emecha bụrụ Zeo Cristofoli?
N'ikpe ikpe site na ụzọ abụọ ahụ si eme mmekọrịta ha, ọtụtụ ndị Fans na-achọ na ha ga-ejikọta otu ụbọchị.
Ugbu a, ka m na-ede akụkọ ndụ a, a ka na-akpado Zoe Cristofoli ka ọ bụrụ nwunye Theo Hernandez. Ha abụọ - ndị nwere ịhụnanya miri emi - ka na-emelite ndị na-akwado ha maka mkpebi nke ịlụ di na nwunye.
Anyị na-ahụ di na nwunye n'ọdịnihu na abụọ lovebirds.
Nwa Theo Hernandez na Zeo Cristofoli:
Ọbụlagodi na ha anaghị emelite ndị fan ihe ọ bụla nkọwa gbasara mgbe ha ga-alụ, ndị hụrụ ya n'anya kpebiri na ha ga-amụ nwa. Theo nwetara enyi nwanyị ya (Zeo) ime gburugburu ọkara nke abụọ nke 2021.
Ime Zeo Cristofoli dị ya mma. N'ebe a, ọ nọ na-atụ anya nwa maka Theo.
N'ihe dị ka etiti ọnwa Nọvemba 2021, Zeo na Theo gara ụlọ ọgwụ maka nyocha Ultrasound. Nsonaazụ (dị ka a hụrụ na vidiyo a) na-ekpughe ọdịdị nwa ahụ. O mere ma Zeo na Theo obi ụtọ nke ukwuu na n'oge na-adịghị anya ha ga-aghọ nne na nna.
Na-emeghachi omume na vidiyo Ultrasound dị n'elu, Zeo Cristofoli kwuru;
Ndụ m niile, ahụrụ m gị n’anya, Theo. Ị bụ ihe niile pụtara.
Hụrụ gị n'anya, ị ga-abụkwa nna kacha mma n'ụwa. Anyị hụrụ gị n'anya Baby!… Ọ bụ a..!
Na-emeghachi omume na nkwupụta ya, Theo dere na mgbidi Instagram ya ebe o gosipụtara mmekọahụ nke nwa ha. Ee, ọ bụ nwata nwoke, ma ọ malitelarị ịkpọ ya, Theo Jr. N'okwu ya…
Ihe kacha mma n'ụwa.😍 #TheoJr ♥ ️ ♥ ️
Ndụ nke Theo Hernandez:
N'ebe ọ bụla bọlbụ, ọ bụ onye ọ na-adị mfe ịhazi nguzozi n'etiti egwuregwu ya na nhọrọ nke ejiji. N'ụwa nke ejiji ejiji maka ndị na-agba bọọlụ, Theo nke anyị na-emekwa ihe dị iche.
Akụkụ nke usoro mgbatị ahụ Theo Hernandez gụnyere ịnya igwe egwuregwu okomoko ya nnukwu igwe - ya na ndị enyi ya. Nke a bụ ebe kacha mma ya na ndị na-anụ ọkụ n'obi na-anya igwe kwụ otu ebe.
Nnukwu ndị hụrụ nkịta n'anya - Zute ndị enyi Zoe na Theo kacha mma:
Ịbụ na mmekọrịta dakọtara pụtara na ọ bụghị naanị na ha na-ekpori ndụ ma na-ahụ anụmanụ ndị yiri ya n'anya.
Mgbe ị na-eleta ụlọ Theo Hernandez, ị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị ya na Zoe, mana ọtụtụ nkịta ha. Gụnyere nwa ha, Theo Junior, lee nnukwu ezinụlọ Theo na Zoe nwere!
Ọtụtụ nkịta n'ụlọ ha, dịka ha hụrụ ya n'anya.
Ndụ Theo Hernandez:
Emefu ezumike na Maldives, na-enweta vitamin D site na anwụ dị jụụ na ịnụ mkpọtụ ebili mmiri nke oké osimiri bụ ọgwụgwọ kachasị maka ọchịchọ ezumike ya.
Maka onye egwuregwu bọọlụ France, ịnwe ezumike zuru oke na oke osimiri Maldives ezughị oke na-enweghị ịhụnanya nke ndụ ya - Zeo Cristofoli - n'akụkụ ya. Nke a bụ vidiyo nke lovebirds abụọ na-eme ihe ha maara ka ha ga-esi eme nke ọma na ezumike ha.
Ụgbọ ala Theo Hernandez:
Ndị French Baller na ụgbọ ala ya dị ka ọ dabara. Wheel ndị a na-agba agba bụ agba dị iche iche - dịka Theo si amasị ha. Ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka eri ahụ dị ka Neymar, Theo Hernandez bụ onye hụrụ ụgbọ ala dara oké ọnụ ahịa. Lee ka ọ bịa na mkpokọta ụgbọ ala ya.
Nchịkọta ụgbọ ala Theo Hernandez. Ndị Baller na-amasị ha nke ukwuu ma mara mma.
Ndụ Ezinụlọ Theo Hernandez:
Ọ dịghị nnọọ ihe pụrụ iche dị ka inwe ezinụlọ nwere njikọ chiri anya bụ́ nke ọ bụghị nanị na-emekọ ihe ọnụ kama na-enwe mmasị n'ebe ibe ha nọ. Nke a bụ ezinụlọ Theo Hernandez na nkenke.
Ọ bụghị naanị na ha jikọtara ọnụ - kama otu ezinụlọ mara mma. A gọziri Theo na Lucas.
Akụkụ a nke akụkọ ndụ anyị na-ekpughere eziokwu ndị ọzọ gbasara nne na nna ya, ụmụnne ya na ndị ikwu ya. Ka anyị malite na Jean-François.
Banyere Theo Hernandez Nna:
Jean-François mụrụ na 23rd ụbọchị nke April 1969 na obodo nke Tours, France. Ezinụlọ ya bụ ndị Spen. Jean-François bụ onye gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Toulouse. Ọ gbara ha bọọlụ n'ọkwa dị elu tupu ọ gawa Sochaux, Marseille na Atletico Madrid.
Ndị otu egwuregwu mbụ ya na-ezokarị aka na Jean-François dị ka ụdị egwuregwu bọọlụ pụrụ iche, onye nwere onwe ya. Nna Theo – dị ka ya onwe ya bụ onye aka ekpe. Otu ihe ahụ dịkwa maka nwanne ya nwoke nke tọrọ ya, Lucas.
N'iguzo na mita 1.90 (ụkwụ 6 na sentimita 3), Nna Theo Hernandez nwere oke dị ka onye mgbachitere etiti. Dị ka a hụrụ ebe a, Fernando Torres (Liverpool Legend) nwere ihu ọma ka ya na Jean-François gwuo egwu.
Jean-François na-egwu ụbọchị ọrụ. Nnukwu onye agbachitere bufere mkpụrụ ndụ ihe nketa ya nye ụmụ ya.
Ebee ka adreesị Jean-François dị?…Ebe ọ bụ na ọ furu efu:
Ọbụna ka ọ dị ugbu a, Nna Theo Hernandez ka enyebeghị ihe kpatara o jiri gbahapụ ezinụlọ ya. N'ịhapụ nwunye ya (Laurence Py) na ụmụ (Theo na Lucas) na-enweghị adreesị ma ọ bụ ego, nanị Jean-François fọdụrụ bụ naanị tọn ụta.
Obi dị m ụtọ na ụfọdụ ndị njem nlegharị anya France afọ ole na ole gara aga hụrụ ya na Kos Samui, àgwàetiti nke abụọ kasị ukwuu na Thailand. E boro ya ebubo na o meghere ụlọ mmanya, mana ọ nweghị onye maara ma ọ ka nọ n'ebe ahụ.
Nne Theo Hernandez:
Laurence Py Revolt bụ onye nwere oke mmasị maka ịga nke ọma n'ọrụ nwa ya nwoke. Anyị na-eto ya maka ịghara iji nkewapụ na di ya bụbu (Jean-François), dị ka ihe ndabere maka ụmụ ya nwoke ịkwụsị ịgbaso nzọụkwụ nna ha na-agba.
Laurence Py mbụ nwa (Lucas) emeriela iko mba ụwa. Theo, nwa ya nwoke nke abụọ, nwere aha Champions League na Real Madrid. Lee nne dị mpako!
Lucas karịsịa, gụnyere Theo, na-agwa mama ya okwu mgbe niile n'asụsụ Spanish karịa iji asụsụ French.
Mwepu na iji bekee na-abịa mgbe ọ bụla ha kwuru okwu "mama". Laurence Py zụlitere ụmụ ya ndị ikom na Spen, ha na-asụkwa Spen nke ọma karị.
Banyere Lucas, Theo Hernandez Nwanna:
Lucas bụ abụọ UEFA Super Cup, UEFA Europa League, World Cup na Champions League meriri. Ọ na-anya onwe ya dị ka nwanne nwoke nke okenye nke Theo, onye, ​​dịka nke 2021, bụ otu n'ime ndị na-azụ azụ kacha mma na football ụwa.
Zute nwanne Theo Hernandez, Lucas. Ọ mara mma nke ukwuu, dị ka obere nwanne ya.
Ewezuga Theo Hernandez's Mama, naanị Lucas (nwanne ya nwoke nke tọrọ) ghọtara ihe mgbu kachasị - n'ihi na ọ hụrụ ihe mere tupu nna ya apụọ.
Theo amachaghị echiche banyere nkewa nke ndị mụrụ ya, ebe ọ bụ na ọ ka dị obere ịmara ihe na-eme n'etiti mama ya na papa ya.
N'ikwu okwu banyere ihe mgbu nke enweghị nna na ndụ ya, Lucas kwuru otu oge;
“Ọ dịtụbeghị mgbe m ghọtara ruo taa. Agaghịkwa m aghọta otú papa m si hapụ ezinụlọ ya n’otu abalị.
Site n’ịhapụ mụ, nne m, na nwanne m nwoke nke nta, Theo.
Ọ bụrụ na otu ụbọchị o kwupụta ọchịchọ ya izute m, n'ezie, m ga-ekweta ná nzukọ ahụ.
Ma ọ bụrụ na ọ chọrọ inye m nkọwa wee pụọ, enweghị m nsogbu na nke ahụ.
N'ihe banyere ndụ, ọ ka bụ nna m, ma agaghị m ahụ ya otú ahụ.
Ihe o mere m, mama m na nwanne m nwoke enweghị mgbagha.”
nwanne nna Theo Hernandez:
N'ịbụ onye na-enweghị Nna nke ndụ, nwoke a rụrụ ọrụ nna, ọ bụghị naanị Theo, kama nwanne ya nwoke bụ Lucas.
Uncle Theo Hernandez bụ nwanne nne ya. Enweghị ntutu isi mere ka ọ nweta aha ya bụ "Nnukwu Uncle" - site na nwa nwanne ya na-agba bọl.
Site n'aha aha nna nwoke Bald, nwoke a bụụrụ Theo nna kemgbe nna ya dị ndụ na-apụ n'anya.
Theo Hernandez ikwu – Nwa nwanne ya:
Nke a obere Chap, nke a mụrụ na August 2018, bụ nwa nwanne ya nwoke nke tọrọ ya na Amelia (onye mmekọ Lucas). Nwa nwanne Theo, onye na-enwe mmasị ka ya na ya na-akpakọrịta, na-akpọ aha Martin Hernandez.
Nke a bụ Martin, nwa Lucas Hernandez. E sere ya n'akụkụ nnukwu nwanne nna ya.
Theo Hernandez nne na nna ochie:
Inwe nne nke nne na nna ya - hale na obi ụtọ - pụtara na ya na Lucas nwere ike ịbụ ndị nzuzu dị ka ha chọrọ ịbụ.
N'ime Grannies niile, anyị na-achọpụta na Theo dị nso na nne nne ya. onye na-edekọ ọrụ ya. Ọ garakwa ihe ngosi Real Madrid ya, dị ka a hụrụ na mbụ.
Nne nne Theo Hernandez nwere nnukwu nganga maka iwulite ezinaụlọ a na-aga nke ọma.
Eziokwu Theo Hernandez na-ekwughị:
Na-eru ikpeazụ na-adọ nke a Bio, anyị ga-eji nke a ngalaba ikpughe ọzọ eziokwu banyere Speedy ekpe-azụ. Enweghị nnukwu mmasị, ka anyị malite.
Eziokwu #1 - Akụkọ gbasara ndina n'ike:
Mgbe ọ nọ na Real Madrid, Theo gara ụlọ oriri na ọṅụṅụ Marbella (Olivia Valère) ebe ya na enyi ya, Luisa Kremleva na-akpakọrịta. The Russian Hispanic nlereanya, dị ka Elespanol, emesia boro Theo ebubo idina ya.
Dị ka ya si kwuo, Theo mesiri ha obi ike na ha bụ enyi, na ha abụọ na-aṅụkọ mmanya ọnụ.
N'otu oge n'abalị, Theo dụrụ ọdụ ka ha pụọ ​​n'èzí na-adọba ụgbọala ebe o nwere ụgbọ ala Porsche Cayenne ya. Mgbe ha banyere n'ime ụgbọ ala ahụ, ha abụọ malitere isu ọnụ ma mee ịhụnanya.
Luisa Kremleva mechara gwa Theo ka ọ kwụsị, nke ọ jụrụ. Mgbe ahụ, ọgbaghara dara n'ime ụgbọ ala ahụ. O boro ya ebubo na ọ manyere ya banye ma tụpụ ya n'ụgbọ ala mgbe o mechara. Na ike nke ịtụfu ahụ mere ka ọ daa na asphalt wee mebie ikpere ya.
N'ihe dị ka ọnwa Jenụwarị 2019, onye ọka ikpe mechiri ikpe ahụ wee bo Kremleva ebubo na ọ na-eme mpụ. Ndị ọchịchị Spanish nwụchiri ya maka ime ya. Na vidiyo nke ebe a na-adọba ụgbọala, ọ bụ naanị ọdịda ka a hụrụ. Ọ dighi kwa ime-ihe-ike di n'etiti ha mb͕e ha nāputa.
Eziokwu #2 - Theo Hernandez emebi ụgwọ ọnwa:
Theo Hernandez AC Milan nbibi ụgwọ ọnwa na Euro (€) - 2021 Stats
Theo Hernandez AC Milan nbibi ụgwọ ọnwa na Pound (£) - 2021 Stats
Kwa Afọ: € 2,656,080 £ 2,229,369
Ọnwa kwa: € 221,340 £ 185,780
Kwa Izu: € 51,000 £ 42,806
Kwa ụbọchị: € 7,285 £ 6,115
Oge Awa ọ bụla: € 304 £ 255
Nkeji ọ bụla: € 5 £ 4
Sekọnd ọ bụla: € 0.08 £ 0.07
Kemgbe ị malitere ile Theo Hernandez's Bio, nke a bụ ihe ọ nwetara na AC Milan.
Ebe Theo Hernandez si bịa, nkezi nwa amaala France na-enweta ihe dị ka euro 31,200 kwa afọ. Yabụ, ọ ga-ewe afọ 71 maka onye France nkịtị ka ya na AC Milan kwụọ ụgwọ kwa afọ.
Eziokwu #3 - Profaịlụ Theo Hernandez:
Ọ bụrụ na ị na-achọ iwu otu FIFA gburugburu kacha mma iri na otu, anyị na-akwado ka ịzụta kpakpando dị ka Theo Hernandez n'akụkụ. Achraf Hakimi. Ha ga-emere gị ọtụtụ ihe ọma ma n'aka ekpe na aka nri.
Theo Hernandez FIFA profaịlụ na-egosi ngwa ngwa ya na ike ya nke na-akọwa etu ijeụkwụ ya si yie nke ụgbọ elu na-agba ọsọ na mbara igwe.
Eziokwu #4 - Ejidere Theo Hernandez Nwanna:
N'ụbọchị 3rd nke February 2017, ndị uwe ojii Spanish jidere Lucas maka ebubo ịwakpo enyi ya nwanyị. Ms Llorente, onye bụ Lucas HernandezOnye hụrụ n'anya, nwere obere mmerụ ahụ site na mwakpo ahụ ma kpọga ya n'ụlọ ọgwụ.
Mgbe ọ pụtasịrị n'ụlọ ikpe, e nyere nwanne nwanne Theo Hernandez (nke dị n'okpuru ebe a) ka ọ nọrọ ebe dị anya na enyi ya nwanyị. Ụlọikpe a makwara Lucas ikpe maka ime ihe ike n’ezinụlọ megide ya.
Nke a bụ Theo Hernandez Nwanna (Lucas) - n'ụlọ ikpe.
Ngwa ngwa na October 2021, a tụrụ Hernandez mkpọrọ ọnwa isii maka imebi iwu mgbochi nke sitere na njide ya na 2017. N'ụzọ dị mma, Lucas meriri mkpesa ya wee gbanarị ịga mkpọrọ.
Eziokwu #5 - Okpukpe Theo Hernandez:
The Speedy Left-azụ ka enyebeghị ihe ọ bụla (ma na pitch ma ọ bụ na mgbasa ozi ya) gbasara njirimara nke okwukwe ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ohere anyị na-akwado Theo Hernandez ịbụ Onye Kraịst.
Tebụl a na-akọwa Profaịlụ Theo Hernandez.
Aha n'uju: Theo Bernard François Hernandez
aha otutu: "Ụgbọ elu"
Ụbọchị ọmụmụ: 6th October 1997
Ndị nne na nna: Laurence Py Revolte (Nne) na Jean-François Hernandez (Nna)
Ọrụ nne: Onye na-eme egwuregwu mbụ
Nwanne: Lucas Hernandez (Nwanne nke okenye)
Nwa nwanyi: Zoe Cristofoli
Nationality: France na Spain
Ndị ikwu: Martin Hernandez na nwanne nna nkwọcha
Ezigbo Net: 7.5 nde pound (2021 stats)
A mụrụ Lucas Hernandez n'ime ezinụlọ na-ebi ndụ ma na-eku ume egwuregwu. Nna ya, Jean-François Hernandez, bụ ọkachamara n'egwuregwu football nke na-egwuri egwu maka klọb ndị a ma ama dị ka Atletico Madrid. N'aka nke ọzọ, mama ya, Laurence Py Revolte, bụ onye na-eme egwuregwu, na ọkwa dị mma.
Theo, tinyere nwanne ya nwoke nke tọrọ ya, Lucas, enwetaghị ihe kacha mma n'oge ndụ nwata. Ná mmalite, ọtụtụ nsogbu di na nwunye nwere ndị mụrụ ha. Mgbe ọ dị afọ ise, nna Theo Hernandez, Jean-François, si na ezinụlọ ahụ pụọ, na-ahapụghị adreesị ebe ọ na-aga.
A hapụrụ Laurence Py Revolte naanị ya ilekọta ụmụ ya n'enweghị nkwado site n'aka di ya gbapụrụ ọsọ.
O kwere ka Theo na Lucas soro na football, n'agbanyeghị na ọ pụtara ịhapụ ihe omume ya iji hụ na nlekọta anya. N'ikpeazụ, ụmụ nwoke ahụ mere mama ha ọnụ.
Onye egwuregwu bọọlụ France kwuputara aha ya na bọọlụ mba ụwa mgbe ọ kpasuru nzaghachi mara mma n'ezie France na-alụ ọgụ iji merie Belgium n'asọmpi UEFA Nations League ọkara ikpeazụ. Site n'ụbọchị ahụ, ọ ghọrọ nnukwu mmasị Didier Deschamps.
Daalụ maka itinye oge a dị mma na-agụ ụdị ndụ Lifebogger nke Lucas Hernandez's Biography. Mgbe ị na-edepụta akwụkwọ akụkọ a na nke ndị ọzọ Ndị na-agba bọọlụ French, ndị otu anyị kwadoro izi ezi na izi ezi.
Jiri obiọma nweta anyị site na ibe kọntaktị anyị, ọ bụrụ na ị chọpụta ihe ọ bụla na-adịghị mma na Theo's Bio. Anyị ga-ejikwa echiche gị kpọrọ ihe gbasara ndị na-agba bọọlụ na ngalaba nkọwa. N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, jiri obiọma na-ekiri ka ndị ọzọ akụkọ football si Lifebogger.